एप्पल आर्केड खेल को आकार | आईफोन समाचार
एप्पल आर्केड: यदि तपाईं खेलहरू डाउनलोड गर्न सुरू गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको आईफोनको क्षमतामा नजर राख्नुहोस्
हिजो अचम्मको कुरा थियो एप्पल आर्केड को आईओएस 13.1 को बीटा संग आईफोन मा निगाह। र म निश्चित छु कि भाग्यशाली व्यक्तिहरू जो गत रात खेलहरू डाउनलोड गर्न सुरू गर्न सक्षम थिए, ती मध्ये केही नयाँ र अविलम्व सूचना प्राप्त भयो केही दिन अघि: "भण्डारण लगभग पूर्ण भयो।" के खेलहरूले धेरै लिन्छ? यसलाई हेरौं।
यो आईओएस १ update अपडेट भित्रै एप्पल आर्केड को उपयोग आउने आशा गरिन्छ। यो एक भुक्तान प्लेटफर्म हो, तर परीक्षणको पहिलो महिना नि: शुल्क छ, त्यसोभए हामी मध्ये धेरै जना साइन अप गर्ने छौं, कम्तिमा खेलहरूको परीक्षण गर्नका लागि। हालसम्म हामीले देख्यौं कि त्यहाँ मात्र 53 XNUMX खेलहरू उपलब्ध छन् (तपाईंसँग छ यहाँ सूचीबद्ध), तर कम्पनीले त्यो घोषणा गरिसकेको छ केहि दिनहरूमा सूची १०० भन्दा बढि विस्तार हुन्छ।
9to5Mac उसले ती सबै डाउनलोड गरिसकेको छ, र हामीलाई केहि जानकारीहरू देखाइएको छ जुन ध्यानमा राख्न महत्त्वपूर्ण छः
कुनै खेल छैन जुन क्षमतामा4जीबी भन्दा बढि छ। सब भन्दा सब भन्दा ठूलो खेल, यस समयमा, RPG साहसिक "Variaus डेलाइफ" हो जसले क्षमताको of.3,8 GB ओगटेको छ। सानो मजाक।
दोस्रो, २.2,9 जीबीको साथ "तातो लाभा" हो। यो कार्य खेल हो जुन हामीले अर्को दिन कीनोटमा देख्यौं। यी दुईले केक लिन्छन् जब यो आकार डाउनलोड गर्न आउँदछ। तब त्यहाँ केवल more खेलहरू छन् जुन क्षमताको २ जीबी भन्दा बढि छ, जस्तै "ओभर द आल्प्स", "हिज्जे डिजाइनर" वा "ओसनहोर्न २"। बाँकी सूची कम डरलाग्दो हो, औसत आकारको about०० एमबीको साथ.
खेलको आकार पनि यो प्रयोग हुन गइरहेको छ जो उपकरण मा निर्भर गर्दछ। आईफोनको लागि खेल एप्पल टिभी जस्तै कब्जा गर्दैन। Available 53 उपलब्ध खेलहरूको पूर्ण डाउनलोड GB 64 जीबी आईप्याड प्रोमा गरिएको छ, र यो पूर्ण रूपमा भरिएको थियो। कुलमा, सबै खेलहरू लगभग GB०GB सम्ममा लिए।
ध्यानमा राख्दै कि त्यहाँ अझै पनी लगभग games० खेलहरू बाँकी छन्, शुरूबाट, हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि सुरुमा उपलब्ध खेलहरूको सम्पूर्ण क्याटलग क्षमतामा १०० जीबी भन्दा बढी हुनेछ।
यदि तपाइँ खेलमा हुनुहुन्छ र तपाइँ एप्पल आर्केडको सदस्यता लिने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाइँ अब त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्न… I यदि मसँग GB 64 जीबी छुट्याइएको छ भने, मसँग आइक्लोडमा सबै छ…।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन अनुप्रयोगहरू » आईफोन खेलहरू » एप्पल आर्केड: यदि तपाईं खेलहरू डाउनलोड गर्न सुरू गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको आईफोनको क्षमतामा नजर राख्नुहोस्
आईफोन ११ प्रो का प्रतिरोध र क्यामेरा नयाँ एप्पल घोषणाहरूको पात्र हो
ट्विटर आईओएस १ of को स्वचालित डार्क मोडसँग उपयुक्त हुनको लागि अपडेट गरिएको छ। हामी कसरी यसलाई सक्रिय गर्ने भनेर हामी तपाईंलाई देखाउदछौं